Heather Theurer sy ny fahitany ny toetran'ny Disney | Famoronana an-tserasera
Sarimihetsika Disney foana mifantoka amin'ny ankizy, na dia niafina tao ambadiky ny hafatra sasany tamin'ny olon-dehibe olon-dehibe aza izy ireo. Ireo hafatra ireo dia nandeha nihoatra ny lalina kokoa ary ny mpanakanto izay miaraka amintsika ankehitriny dia mamoaka kely azy ireo hanome feo manjombona kokoa an'i Alice na Peter Pan.
Na dia manana kalitao teknika goavambe aza amin'ny sary hosodoko, ny asan'ny Theurer dia manana rivotra somary mampidi-doza mba hitondrantsika tarehin-tsoratra Disney olon-dehibe bebe kokoa izay tena manandanja tokoa ny fanesoana sy ny asa ratsy. Izay holazaina fa ny ampahan'ny asany dia an'i Disney mihitsy.
Vao avy namoaka sombiny vaovao izy mifototra amin'i Alice in Wonderland izay nantsoiny hoe "Madala daholo isika eto." Fomba iray hanehoana ny hadalana voajanahary amin'ity asan'ny literatiora ity izay mahatonga ny fisainana ho iray amin'ireo hatsaram-panahiny lehibe.
Ny sombiny hafa dia avy amin'ilay sarimihetsika Brave (Brave) sy Peter Pan. Sangan'asa roa izay mitohy milalao miaraka amin'ireo toetra tsara noho ny an'i Alicia ary mitarika antsika amin'izany fomba manokana izany. Asa solika mendrika homarihina ary raha mankany amin'ny tranonkalany isika dia ho hitantsika fa milalao amin'ny sanganasa mahazatra kokoa izy io saingy manana kalitao tsara amin'ny sary hosodoko.
Efa nitondra ny asany aho miaraka amin'ny Stitch toetra amam-panahy ary izany dia naneho ny fomba ny mampianatra tena dia fomba iray hafa hiditra amin'ny tontolon'ny zavakanto sy ny sary hosodoko. Nanomboka ny tranokalanao Azonao atao ny manakaiky ny sisa amin'ny asany izay anisany ny fiainam-biby, ny nofinofy ary ireo sanganasa ho an'ny Disney ireo. Mpanakanto sary iray hanaraka fa tena hiverina any amin'ireo faritra ireo isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Tarehintsoratra Disney araka ny fahitan'i Heather Theurer